यस्ता गुण भएका पुरुषसँग हुरुक्कै हुन्छन् महिलाहरू ! – Online Khabar 24
हेर्नुस यो भिडियो ,
भनिन्छ हरेक महि’लाले आफ्नो जीवन साथीको कल्पना गरेका हुन्छन् । यो भिडियो अवश्य हेर्नुहोला ,
पुरुषमा उनीह’रुले त्यस्ता धेरै गुणहरु खोज्छन् जसमा पुर्णता होस् । सबै महिलाहरुले आफूले चाहे जस्तै पुरुष नभेटे’पनि पुरुषमा यस्ता केहि गुण हुनै पर्छ जसले उनीहरुलाई आकर्षित गर्छ । महिलाले पुरुषमा खोज्ने गुणहरु:
तपाई पनि आफूमा परिवर्तन ल्याउनुहोस्, यी गुणहरु छैन भने ल्याउने को’शिस गर्नुहोस् निश्चय तपाई पनि महिला’को रोजाईमा पर्नु हुने छ । महिलाहरु साना साना कुराले खुसि बनाउँछ त्यसै’ले उनलाई साना साना कुराले नै खुसि दिनुहोस् ।एजेन्सी यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevनिर्माताको ‘ओछ्यान’ बन्न नमान्दा फिल्मबाट निकाले !
nextजहाँ पाइन्छन् भाडामा प्रेमीका, १७ रुपैंयामा पाइने यि प्रेमीकासँग प्रेमीले के के गर्न पाउँछन् ?